China nylon pulley yakagadzirirwa fekitari yekusimudza uye vatengesi H & F. nylon
Uye tichitevera isu tinounza zvimwe zvakajairika kududzirwa kweelevhuru nylon pulleys:
MC Nylon yakanyorerwa kuelevator pulley
Inopfuura 95% Nylon Plus 5% zvimwe zvinoshandiswa
∅520 * ~ 140 * 120
406 * -130 * 100
Isu, Huafu tave tichiedza kutungamira, kunyengetedza vatengi vedu kuti vaedze kweNylon zvinhu pulleys panzvimbo yesimbi pulleys. Vatengi vazhinji vakashandisa kuisa nylon pulleys mushure mekuyedza zvese zviverengero zvemavhiri enylon. Ivo vanofanirwa kunge vakambogadzira nylon pulleys munhaurwa dzedu dzekupedzisira nevatengi vedu. Uye ivo vanoti vashandi vavo vanofarira kuisa nylon pulleys yekuisa nylon pulleys kudzikisira kushanda kwavo, chengetedza nguva yavo yekushanda kuti vaite rimwe basa. Uye ivo vanogona kuve nenguva yekuzorora yakawanda yekuisa nylon pulleys inovandudza kushanda kwese kushanda.
Sezvo nguva ichienderera mberi, vatengi vachiwedzera uye vanovamba kuona zvakanakira matomu enylon uye ivo vanodisisa kuyedza zvigadzirwa zvitsva kuvandudza iwo wese mwero wezvigadzirwa zvavo mune zvekuchengetedza, nyore, mhando. Uye isu tinotenda kuti nylon pulleys ichave nekushandisa kwakawanda muelevheta indasitiri.
Pashure: Nylon Pin neyakaomarara - H & F. nylon
Zvadaro: zvinhu zvenaironi giya kuti michini
Yakakwira mhando Nylon Pulley
Plastiki Nylon Pulley
Zvishoma nezvishoma mumatope Door zvinhu zvenaironi chisimudziso
Zvishoma nezvishoma mumatope zvinhu zvenaironi chisimudziso
Diki Nylon Pulleys
Kutakura Nylon Pulley